Religion Archives - Page3of 53 - Gloria News Journal
Pope Francis confirmed His Visit to Thailand in November 2019
Mandalay, August 25, 2019, Joseph Kung Za Hmung
Pope Francis confirmed that he will be visiting Thailand in November 2019. This trip is confirmed by His Grace Archbishop Paul Tschang In-Nam, presently Apostolic Nuncio in Thailand and Cambodia and Apostolic Delegate in Laos, as Apostolic Nuncio in Myanmar during his meeting with Catholic priests of Mandalay Archdiocese on 25 August 2019 in Mandalay, Myanmar.
His Grace Archbishop Paul Tschang In-Nam told Mandalay Catholic priests and bishops to pray for successful preparation for visit of Holy Father Pope Francis to Thailand.
Pope Francis appointed Archbishop Paul Tschang In-Nam, presently Apostolic Nuncio in Thailand and Cambodia and Apostolic Delegate in Laos, as Apostolic Nuncio in Myanmar (Burma) in 2017.
Pope Francis will be the third ..
ပါစကားပွဲက ယုံကြည်သောသူတွေရဲ့အသက်တာဟာ သချိုင်းကုန်းမှာ အဆုံးသပ်တာမဟုတ်ဘူးဟု ရဟန်းမင်းကြီးဖရန်းစစ်အရှင်သူမြတ်ဟောကြား
ရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ်က ပါစကားပွဲ (ခရစ်တော်ဘုရား၏သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းပွဲ) ဟာ ယုံကြည်သောသူတွေရဲ့အသက်တာဟာ သချိုင်းကုန်းမှာ အဆုံးသပ်တာမဟုတ်ဘူး ဆိုတာကို မိမိတို့အား သက်သေ ထူနေလေသည်ဟု ဧပြီလ (၂၀) နေ့က ဟောကြားတော်မူလိုက်သည်။
ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်တို့အတွက် ပါစကားပွဲး သခင်ခရစ..
မစ္ဆားဆိုတာ လောကမှာ ရှိတဲ့ နိဗ္ဗာန်ဘုံဘဲ၊ ကောင်းကင်ဘုံဖြစ်တယ်ဟု တောင်ကြီးကက်သလစ်ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီး ဘာစီးလီအိုအသိုက်က မိန့်ကြား
မစ္ဆားဆိုတာ လောကမှာ ရှိတဲ့ ကောင်းကင်ဘုံဖြစ်တယ်ဟု တောင်ကြီးကက်သလစ်ဂိုဏ်းချုပ် ဆရာတော်ကြီး ဘာစီးလီအိုအသိုက်က ကြာသပတေးနေ့ကြီးဖြစ်သော ဧပြီလ (၁၈)၊ ၂၀၁၉ မိန့်ကြားတော် မူလိုက်သည်။ ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ဩဝါဒက အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
]]Last Supper သခင်ယေဇူး၏နောက်ဆုံး�..
နတ်ဆိုး၏ နှောင့်ယှက်တတ်သော နည်းလမ်းများကို သခင်ခရစ်တော်က ဖော်ပြပေးဟု ရဟန်းမင်းကြီးက မီးမောင်းထိုးပြတော်မူ
ဗာတီကန်၊ မတ်လ ၁၀၊ ၂၀၁၉
အပတ်စဉ်တွေ့ဆုံနေကြ လူထုတွေ့ဆုံခြင်းနှင့် အန်ဂျေလူးမေတ္တာရွတ်ဆိုခြင်းတွင် ဝါတွင်းကာလပထမတနင်္ဂနွေနေ့ သမ္မာကျမ်းစာကို အခြေခံပြီး သခင်ယေဇူးအားနတ်ဆိုးနှောင့်ယှက်ခြင်းအကြောင်းကို ရှင်းပြဟောကြားတော်မူလိုက်သည်။ ရဟန်းမင်းကြီး၏ ဩဝါဒ အပြည့်အစုံမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်..
မြန်မာနိုင်ငံ ကက်သလစ် ဆရာတော်ကြီးများ အဖွဲ့ချုပ် CBCM ၏၂၀၁၉-ခုနှစ်၊ ပထမ (၆) လပတ် မျက်နှာစုံညီ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ
ရန်ကုန်၊ မတ်လ (၁၁)၊ ၂၀၁၉ CBCM OSC
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကက်သလစ်ဆရာတော်ကြီးများအဖွဲ့ချုပ်CBCM၏၂၀၁၉-ခုနှစ်၊ပထမ(၆)လပတ်အစည်း အဝေး ကို ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၈ ရက် မှ ၁၁ ရက်အထိ ကျင်းပခဲ့ရာ ကျန်းမာရေး အခြေအနေကြောင့် မလာရောက်နိုင်သော ဆရာ တော် အိုက်ဇက်ဓါနုမှလွဲ၍ ဆရာတော်များအားလုံး တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၀ါတွင်း ကာလအတွက် ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန်စစ်၏ သတင်းစကား
“အကြောင်းမူကား ဖန်ဆင်းခံကမ်္ဘာမြေသည် ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများ ပေါ်လွင်ထင်ရှားလာခြင်းကို စိတ်အား ထက်သန်စွာ တောင့်တစောင့်မျှော်လျှက်ရှိ၏ (ရောမသြ၀ါဒစာ ၈း၁၉)။
ညီအစ်ကို မောင်နှမ အပေါင်းတို့၊
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ပါစကား နက်နဲဖွယ်ရာများအား စိတ်၊ နှလုံးဆန်းသစ်ခြင်းဖြင့် ကျင်းပရန် ပြင်ဆင်နေချိန်�..